Isiteyitimenti semicimbi yeBarbados kubagibeli abaNtsundu beMillennium kuvavanyo oluqinisekileyo lwe-COVID-19 | Iindaba zeBarbados zokuhamba
Ikhaya » izithuba » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zeBarbados zokuhamba » IBarbados ikhupha ingxelo malunga nokuvavanywa kwabagibeli beMillennium yoVavanyo lwe-COVID-19
Iindaba zeBarbados zokuhamba • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Iindaba zeCaribbean • Iindaba zoMsebenzi woHamba • Imicimbi kaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Iindaba zeShishini lokuBuka iindwendwe • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • omnye • Iindaba ezijongene noKhenketho • Iindaba zoKhenketho • Intetho yezoKhenketho • Iindaba zothutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel
Ukusukela ukushiya iBarbados, inqanawe yatsala umnxeba kwezinye iindawo ezintathu, kwaye kungokunje ibuyela eSt.
I-Millennium yoSaziwayo ibekwe eBarbados ngoMvulo, nge-7 kaJuni ngo-2021 njengezibuko lokuqala lokufowuna
Abagibeli ababini boSaziwayo beMilennium bavavanyelwe i-COVID-19
Ngaphezulu kwe-1200 abagibeli abagonywe ngokupheleleyo kunye nabasebenzi ababekhwele enqanaweni
I-Millennium yoSaziwayo yashiya indawo yayo yokuhlala ePhilipsburg, eSt. Maarten yohambo lokuhamba ngenqanawa ebusuku Barbados NgoMvulo, nge-7 kaJuni, ngo-2021 njengezibuko lokuqala lokufowuna. Bonke abagibeli bavavanywa ngaphambi kokuqala kwaye babengenanto ngelo xesha. Ukusukela ukushiya iBarbados, inqanawe yatsala umnxeba kwezinye iindawo ezintathu, kwaye kungokunje ibuyela eSt.
Sazisiwe ngamaqabane ethu e Umntu odumileyo kwiiNdawo zokuHamba ukuba ngexesha lokuphela kovavanyo lokuhamba ngenqanawa, ngelixa babuyela eSt. Maarten, abakhweli ababini abangaphezu kwe-1200 abagonyo abagibileyo kunye namalungu abasebenzi ababekhwele enqanaweni, bavavanyelwa i-COVID-19. Zombini zi-asymptomatic kwaye ziqhuba kakuhle. Sibanqwenelela ukuchacha ngokukhawuleza.
Inyaniso yokuba le yenzekile ekupheleni kovavanyo lokuhamba ngenqanawa, iyasiqinisa ukomelela nokubaluleka kokunamathela kuzo zonke iinkqubo ngalo lonke ixesha. Ukuthotyelwa ngokungqongqo kwiiprotokholi kunceda wonke umntu ukuba aqhubeke namava obomi ngendlela esondele kunesiqhelo ngangokunokwenzeka, ngelixa sihlala sisazi ukuba i-COVID ihlala nathi kwaye ke kufuneka siziqhelanise. Esi sisiseko sendlela esisebenza ngayo ngawo onke amaxesha kwaye yiyo loo nto siphinde saqala ukuhamba ngononophelo ngolu vavanyo lokuqala. Ukuhamba ngenqanawa, siqulunqe saza sasebenzisa iinkqubo zokungena emngceleni ngokungqongqo kunye neenkqubo ezinje ngee-bubble tours, ukusivumela ukuba silawule ngokufanelekileyo intshukumo ngokukhuselekileyo kunye nokubonelela ngomkhondo wonxibelelwano. Kubalulekile ukuba sonke siqhubeke nokulandela iinkqubo njengoko sinxibelelana kwalapha kwaye samkela abahambi.